Ahoana no mahomby ny lisitry ny lisitry ny vokatra Amazon?
Amazon dia sehatra e-varotra lehibe indrindra eran-tany. Miasa tsara tarehy toy ny milina fikarohana hafa izy, manome ny mpampiasa vokatra vokatra mifanaraka amin'ny fanontaniany. Zava-dehibe ny fiheveranao ny fanatsarana sy ny fomba mety hanovana fomba fanao tsara indrindra isan-taona. Tahaka ny fitaovam-pikarohana hafa malaza, Amazon dia manana ny fitsipika manokana sy ny toro-lalana tokony harahinao mba hahitana ny mpanjifa mety aminao. Tena fivarotan-tseranana tena tsara izy io mba hisarihana ny mpitarika ny lohanao; Mila mampiasa vola amin'ny lisitry ny fanatsarana ny lisitry ny lisitry Amazon ianao.
Raha tsy niahiahy velively momba ny fanatsarana ny vokatrao ho an'i Amazon ianao, tsy dia lavitra loatra ianao, fa amin'izao fotoana izao dia fotoana tsara hanombohana tetik'ady. Ity lahatsoratra ity dia natao hanehoana anao ny fomba hampahafantarana ny lisitry ny vokatra Amazon ao amin'ny lisitra tsara ary hampiroborobo ny mpanjifa maro kokoa amin'ny fikarohana.
Teknikam-pitaovana hanatsarana ny lisitry ny vokatra Amazon
Mba hahazoana ny lisitra ilaina, dia mila manome ny mpiserasera amin'ny sary tsara tarehy vokatra tsara ianao. Ny hany fomba ahafahan'ny mpanjifanao mety handinika ny vokatra iray hividianana azy dia sary avy amin'ny sary samy hafa. Amazon dia manana ny fepetra momba ny sarin'ny vokatra izay ahitana ny mari-pamantarana ara-teknika sy ny fahitan'ny tranonkalan'i Amazon amin'ny sary. Ny fepetra fototra momba ny kalitao fototra dia milaza fa ny sary dia tokony hifantoka, hamela na haka sary, miaraka amin'ny loko mivantana sy ny sisiny miavonavona. Ankoatr'izay, mila mahazo antoka ianao fa feno 85% na mihoatra ny endriky ny sary.
Ny sary asehonao amin'ny lisitry ny vokatra dia matetika mahavariana na faka ho an'ny ankamaroan'ny Amazon mpikaroka. Izany no antony tokony hampifanarahanao azy ireo ampy mba hampiroborobo ny mpikaroka amazonin'i Amazon ny vokatrao.
Ampiasao ny lohateninao
Araka ny voalazan'ny Amazon, tokony hanaraka rindrambaiko manokana ianao mba hananganana ny lohateninao. Ity rindran-damina ity dia mitovitovy - "marika + modela + model + model + model
pejy vokatra, azonao atao ny manamarina ny lahatsoratry ny biletà eo ambanin'ny lohateny. Eto ianao dia afaka mamaritra ny tarehimarika tianao ary ampiasao amin'ny fomba maika ny teny fanalahidinao. Tsy afaka misintona ity dingana ity ianao satria manampy ny mpampiasa handray fanapahan-kevitra hividy.
Na izany aza dia ilaina ihany koa ny manampy ny famaritana amin'ny antsipirihany ny vokatrao. Indraindray ny mpivarotra an-tserasera dia manakorontana momba ny famaritana ary manadino ny mampiditra azy manontolo. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy afaka mamaly ny fanontaniana rehetra amin'ny mpampiasa amin'ny vokatra azonao ny bala. Izany no antony ilainao ny mamaritra azy amin'ny antsipiriany, manome ny mety ho mpanjifa amin'ny vokatra rehetra sy ny endri-javatra rehetra. Tsy tokony hanoratra eto momba ny orinasa ianao na hanisy fampahafantarana fampahafantarana. Ny tanjonao voalohany dia ny manao ny fampisehoana ny zavatra tianao hovidina Source .